Paul Dirac: အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ဘဝနှင့် သိပ္ပံလောကရှိ အမြတ်ထုတ်မှုများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 08/11/2021 16:08 | သိပ္ပံ
သိပ္ပံပညာလောက၏ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းဖူးသော ရူပဗေဒပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Paul dirac. သူ၏အမည်အပြည့်အစုံမှာ Paul Adrien Maurice Dirac ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ 8 ရက် 1902 တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် အောက်တိုဘာလ 20 ရက် 1984 တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး သင်္ချာပညာရပ်တွင် ထူးချွန်သော ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ Paul Dirac ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိနဲ့ သူ့ရဲ့ အမြတ်ထုတ်ပုံတွေကို ပြောပြပါမယ်။
1 Paul Dirac ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
2 Paul Dirac ၏လုပ်ဆောင်ချက်အချို့
4 သူ့နေ့ရက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတယ်။
Paul Dirac ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ Bristol မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဖေက ပြင်သစ်နိုင်ငံပိုင် ကျောင်းဆရာဖြစ်ပေမယ့် ဆွဇ်ဇာလန်နွယ်ဖွားပါ။ ပေါလုသည် သူ့အဖေသင်ပေးသောကျောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သူ၏သင်္ချာစွမ်းရည်ကြောင့် အမြဲလူသိများခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာက ရှင်းပါတယ်။ Bristol တက္ကသိုလ်တွင် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို သင်ယူခဲ့သည်။ အစကတည်းက သူသည် ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် သင်္ချာအနီးစပ်ဆုံးအသုံးပြုမှုကို တွန်းအားပေးရန် အထူးသဖြင့် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရပြီးနောက် သူသည် အိုင်းစတိုင်း၏ နှိုင်းရသီအိုရီသို့ ဆွဲဆောင်ခံရပြီး သင်္ချာဘာသာရပ်အတွက် Cambridge တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
သူ၏တက္ကသိုလ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုစဉ်တွင်၊ ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် ရင့်ကျက်လာသော အီလက်ထရွန်ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ ကွမ်တမ်သီအိုရီကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်အားသွင်းမှုမှလွဲ၍ အခြားကဏ္ဍအားလုံးတွင် အီလက်ထရွန်နှင့်တူညီသော အမှုန်များရှိကြောင်း အဆိုပြုခဲ့သည်- အနှုတ်ဓာတ်အားသွင်းထားသော အီလက်ထရွန်နှင့် ဤယူဆချက်အားသွင်းထားသော အမှုန်အမွှားများဖြစ်သည်။
Max Born သို့မဟုတ် Pascual Jordan ကဲ့သို့သော သိပ္ပံပညာရှင်များ တူညီသော သုတေသနကို တပြိုင်နက်တည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ကွာခြားချက်မှာ Dirac မှအသုံးပြုသော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၏ ယုတ္တိရိုးရှင်းမှုတွင် တည်ရှိနေသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးတွင်၊ 1932 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ရူပဗေဒပညာရှင် Carl Anderson မှ positron ဟုခေါ်သော အမှုန်အမွှားတစ်မျိုးကို စကြာဝဠာရောင်ခြည်များနှင့် တိုက်မိသော အမှုန်အမွှားများကို စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး အမှုန်၏ခြေရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Dirac သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်၏ စက်ပြင်ဆိုင်ရာ သင်္ချာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်တွင် နှိုင်းရသီအိုရီကို ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ရောင်စဉ်တန်းမျဉ်း၏ ရှင်းလင်းချက်အပြင် အီလက်ထရွန်အား လှည့်ပတ်အကျပ်ရိုက်ခြင်းကို ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖော်ပြသည့် အီလက်ထရွန်၏ Dirac ညီမျှခြင်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်၊ သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းသည် ဤရဲရင့်သောယူဆချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သံသယအချို့ရှိသည်။
Paul Dirac ၏လုပ်ဆောင်ချက်အချို့
အချို့ကိစ္စများတွင် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် လူသိများသော်လည်း၊ ကိန်းဘရစ်ချ်၊ စိန့်ဂျွန်ကောလိပ်တွင် သင်ကြားရန် တွန်းအားပေးသည့် အခြေအနေတွင် အလုပ်ရှာရန် ခက်ခဲသည်။ RH Fowler ဦးဆောင်သော ဤကျောင်းသည် Niels Bohr ၏ အနုမြူ ရူပဗေဒနယ်ပယ်တွင် ရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ကူညီသူဖြစ်ပြီး Dirac သည် ရူပဗေဒတွင် တိုးတက်မှုများကို အမီလိုက်နိုင်စေခဲ့သည်။ ဆရာမအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်း၊ "ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ဆိုင်ရာမူများ" (1930) ရေးခဲ့သည်။
Dirac သည် Fermi-Dirac ကိန်းဂဏန်းမက္ကင်းရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကြောင့်လည်း ချီးကျူးခံရသည်။ အဆိုပါ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများက သူ့ကို Erwin Schrödinger နှင့် မျှဝေခဲ့သည့် 1933 ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်လ်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် တော်ဝင်အသင်း၏ ဖော်မလင်ဖြစ်လာသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ သူ၏အမည်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိလာခဲ့ပြီး၊ ကိန်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ်တွင် သင်္ချာပါမောက္ခအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရကာ နောက်ပိုင်းတွင် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒပါမောက္ခအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ရယ် သူသည် Advanced Education for American Physical Society ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
Dirac သည် အီလက်ထရွန်များ၏ အပြုအမူကို ကွဲပြားမှုညီမျှခြင်းလေးခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း နာခံသည့် လှိုင်းလုံးလေးခုဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဤညီမျှခြင်းများမှ အီလက်ထရွန်များသည် ၎င်းတို့၏ဝင်ရိုးတစ်ဝိုက်တွင် လှည့်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အတိုချုပ်အားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်နှင့် မကိုက်ညီသည့် အနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် Dirac ဤအခြေအနေရှိ အီလက်ထရွန်၏ မလုံလောက်သော စွမ်းအင်သည် ခဏတာ အပြုသဘောဆောင်သော အမှုန်အမွှားများနှင့် ညီမျှသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
Dirac သည် Ralph Fowler ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် သီအိုရီရူပဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသနပြုလုပ်ရန် Cambridge University စိန့်ဂျွန်ကောလိပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် Dirac သည် အလုပ်ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။. ယခုအချိန်တွင် ရူပဗေဒလောကတွင် သူ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ လွှမ်းမိုးနေသည်။ သူ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု အများအပြားကို ကွမ်တမ် မက္ကင်းနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်ဟု ယူဆပါသည်။ အဏုမြူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် ၎င်း၏တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူအများဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ယခု Margit Balasz နှင့်သူ၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ဟန်ဂေရီရူပဗေဒပညာရှင် Eugene Wigner ၏ညီမဖြစ်သောကြောင့် သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်တွင် တိုးတက်ရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ၏သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကြီးမားသောပံ့ပိုးမှုပေးထားသည်။ ဒါ့အပြင် Margit က အမြဲအားပေးပါတယ်။ Dirac သည် Quantum Singularities in Electromagnetic Fields (1931) ကဲ့သို့သော စာပေများစွာကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤသုတေသနကိုလုပ်ဆောင်ရန် Maxwell ၏ညီမျှခြင်းများကိုအခြေခံသည်။
နှစ်နှစ်အကြာတွင်၊ သူသည် လမ်း၏ အဓိကကျသော သီအိုရီတွင် ၎င်း၏ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Richard Feynman သည် ဤအလုပ်မှ သီအိုရီများစွာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပတ်သက်သည့် သုတေသနများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Paul Dirac သည် 1969 ခုနှစ်တွင် Cambridge တွင် သူ၏ သိပ္ပံပညာကို ပြီးစီးခဲ့ပြီး သူ၏ အသက်အရွယ်ကြောင့် အနားယူပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်ကာ United States ရှိ Florida State University သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူနဲ့ သူ့ဇနီးက ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Tallahassee ကို ပြောင်းသွားတယ်။ နောက်ဆုံး၊ အောက်တိုဘာလ 20 ရက် 1984 တွင် Dirac ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက် လူတွေက သူ့ရဲ့ သိပ္ပံပညာကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဏုမြူဗုံးများထုတ်လုပ်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသောကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ ကဏ္ဍအများအပြားတွင် ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းခံရသည်။
ဤနှင့် အခြားထူးခြားသော ပံ့ပိုးမှုများဖြစ်သည့် ကွမ်တမ် ဓာတ်ရောင်ခြည် သီအိုရီ သို့မဟုတ် Fermi-Dirac ကိန်းဂဏန်း မက္ကင်းမှု တို့က သူ့ကို ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်လ်ဆုနှင့် ယမန်နှစ်က သင်္ချာဘာသာရပ် Lucas Chair ဖြစ်သော Erwin Schrödinger နှင့် အတူ ရရှိခဲ့သည်။ 1933 ခုနှစ်အထိ၊ နောက်ဆုံးတွင်သူသည် United States သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး 1968 ခုနှစ်တွင် Tallahassee တက္ကသိုလ်တွင် Emeritus ပါမောက္ခအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
1933 ခုနှစ်တွင် သူသည် Erwin Schrödinger နှင့် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုကို မျှဝေခဲ့ပြီး အီး၊1939 တွင် တော်ဝင်အသင်း၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1932 မှ 1968 ခုနှစ်အထိ Cambridge University တွင် သင်္ချာပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီး 1971 ခုနှစ်မှ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့ကာ 1934 မှ 1959 ခုနှစ်အထိ Advanced Institute ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Paul Dirac သည် 20 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 1984 ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Tallahassee တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် Paul Dirac နှင့် သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » သိပ္ပံ » Paul dirac